Pyone Pyone Lay - Page 165 of 173 - News & Entertainment
“ ဖောက်ပြန် သွားတဲ့ ရည်းစားကို ပညာပေးဖို့”
“ ဖောက်ပြန် သွားတဲ့ ရည်းစားကို ပညာပေးဖို့” ဖောက်ပြန် သွားတဲ့ ရည်းစားကို ပညာပေးဖို Facebook ပေါ် တက် အရှက်ခွဲ နေစရာ မလိုပါဘူး “ ဘာလို့ မလိုတာလဲ ဆိုတော့ – သူ စိတ်ညစ်သွား တာထက် မင်း ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုက ပိုအရေးကြီးလို့ သူ့သိက္ခာထက် မင်းရဲ့ သိက္ခာက ပိုတန်ဖိုး ရှိလို့ ချစ်သူ သက်တမ်းတွေ Anniversaryတွေ ဖြတ်သန်း ခဲ့ကြ တယ်။ သူ့အကြောင်း ကိုယ့်ထက် ဘယ်သူမှ ပိုမသိ နိုင် ခဲ့တဲ့ နားလည်ခြင်းတွေ ၊ အမှတ်တရတွေ အများကြီးနဲ့ နှစ်ဖက် မိဘတွေ …
အချစ်ကြီးလွန်းတဲ့ မိန်းကလေးတွေပဲ ကြုံလေ့ရှိတဲ့ အရာများ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ခံစားရတဲ့ ပုံစံ မတူပါဘူး။ တစ်ချို့တွေကတော့ ခံစားချက်တွေကို ခန့်ခွဲနိုင်ကြပြီး စိတ်တည်ငြိမ် ကြပါ တယ်။ တစ်ချို့တွေကတော့ ခဏပဲ ခံစားကြတယ်။ တစ်ချို့တွေကတော့ ထိလွယ် ရှလွယ်။ တစ်ချို့တွေကတော့ အချစ်ကြီးကြ တယ်။ အချစ်ကြီးတဲ့ သူတို့လို လူမျိုးတွေက ဒီလို အခြေအနေတွေ အမြဲ ကြုံရလေ့ ရှိတယ်။ (၁) အသည်းကွဲတယ် သူတို့တွေကတော့ မကြာခဏ အသဲကွဲ တတ်ပါတယ်။ တစ်ချို့တော့ တစ်ခါ နှစ်ခါလောက်ပဲ အသည်းကွဲ ရပါတယ်။ သေချာတာကတော့ သူတို့က အချစ်ကြီးလို့ အသည်းကွဲ ခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်လွန်းလွန်းလို့ …
ဥာဏ်ကောင်းတဲ့သူတွေ Single ဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းရင်း ( ၇ ) ချက်
ဥာဏ်ကောင်းတဲ့သူတွေ Single ဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းရင်း ( ၇ ) ချက် ထက်မြက်ခြင်းက ဘဝမှာ အောင်မြင်မှုတွေ ရအောင် ကူညီပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုမှာ ထက်မြက်မှူကို အောင်မြင်မှုက ထိန်းချုပ်ထားတယ် ဆိုတာလည်း သင်တွေ့ရမှာပါ ။သင့်တစ်ဘဝလုံး အမြဲတမ်း single ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလမ်းကို သင် ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်ခဲ့တာပါပဲ ။ ဒါပေမယ့် ဒီခေတ်မှာ သင့် ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေက အချစ်ကို တွေ့သွားပြီး RS တွေ ချိတ်သွား ကြတာ မြင်ရမှာပါ။ သင် ကိုယ်တိုင် ကြုံ နိုင်လောက်တဲ့ အရာ တွေ ကိုတော့ သင် အံ့ဩ …
သူတို့ပြောတဲ့ ‘ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်တိုက်ပွဲ’ အကြောင်း.
သူတို့ပြောတဲ့ ‘ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်တိုက်ပွဲ’ အကြောင်း. မနေ့ကယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သော လက်စ်တာအသင်းနှင့် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းတို့၏ ပွဲစဉ်များအပြီးတွင် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် နောက်ခံလူဟောင်း ရီယို ဖာဒီနန်.၊ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်း ကွင်းလယ်ကစားသမားဟောင်း အိုဝင် ဟားဂရိဗ် နှင့် လက်စတာ စီးတီး ကွင်းလယ်ကစားသမားဟောင်း ရော်ဘီ ဆားဗေ့ခ်ျ တို့က BT Sports ရုပ်သံ အစီအစဉ် မှ တင်ဆက်သော Premier League Tonight အစီအစဉ်မှတဆင့် ချယ်လ်ဆီး၊ လက်စ်တာ စီးတီးနှင့် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းများ၏ ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်တိုက်ပွဲ အခြေအနေ၊ အခွင့်အရေးများကို ယခုလိုသုံးသပ် ဆွေးနွေးသွားခဲ့သည် ။ ဂျိတ်ခ် ဟမ်းဖရေး – အခုဆိုရင် …
တဖက်သတ်ချစ်မိပြီဆိုရင် ဘာတွေ ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုလဲ
တဖက်သတ်ချစ်မိပြီဆိုရင် ဘာတွေ ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုလဲ လူတစ်ယောက်ဟာ တစ်ချိန်မဟုတ် တစ်ချိန်မှာတော့ ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျပြီး၊ ကိုယ့်ကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ပြန်မချစ်နိုင်မယ့်သူတစ်ယောက်ကို ရူးရူးမူးမူး၊ စွဲစွဲလမ်းလမ်း ချစ်မိသွားနိုင်တာပဲ မဟုတ်လား။အဲ့လိုအခြေအနေတွေနဲ့ ကြုံဆုံလာရပြီဆိုရင်၊ ဘာတွေပြင်ဆင်ထားသင့်လဲ ဆိုတာတွေကို ဆွေးနွေးကြည့်ကြရအောင်လေ။ ပြီးမှ အတူဖက်ငိုကြတာပေါ့။ (၁)။ ဘာမျှော်လင့်ချက်မှ မထားပါနဲ့ သူ့စိတ်က တစ်နေ့နေ့တော့ေ့ပြာင်းလာမှာဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်မျိုး၊ ကိုယ့်အချစ်ကို တစ်ချိန်ကျရင် အသိအမှတ်ပြုလာမှာဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်မျိုးတွေက အန္တရာယ် သိပ်များပါတယ်။ ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ်ပြန်သတ်နေမယ့် အတွေးတွေမို့၊ လုံးဝမထားပါနဲ့။ (၂)။ ငေးကြည့်နေရရုံနဲ့ ကျေနပ်ပါ သူဆိုတဲ့ဖြစ်တည်ချက်လေးကို ချစ်တာမဟုတ်လား။ အဲ့ဒီ့တော့ သူဘာလုပ်လုပ် ဝေးဝေးကပဲငေးကြည့်နေပါ။ မြင်နေသိနေရရုံနဲ့ပဲ ကျေနပ်ပါ။ အဲဒီထက်ကျော်ချင်လာရင် စပြီးပူလောင်လာမှာမို့ပါ။ (၃)။ သူ့ကို …
Boy ဆန်တဲ့ ဖက်ရှင်ကို ကြိုက်တဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားများ
Boy ဆန်တဲ့ ဖက်ရှင်ကို ကြိုက်တဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားများ မိန်းကလေးဆိုတာ အလှကြိုက်တယ်၊ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပုံတွေနဲ့ လှတပတ မိန်းကလေးဆန်တဲ့ အဝတ်တွေကိုပဲ ကြိုက်ကြ တာချည်းလို့ မထင်လိုက် ပါနဲ့။ မိန်းကလေးတွေမှာ boy fashion ကိုမှ ကြိုက်တဲ့ ဝတ်တတ်တဲ့ သူတွေ ရှိပါတယ်။ သူတိူ့တွေကတော့ (1) ဖက်ရှင်ကို စိတ်ဝင်စားတယ် ဖက်ရှင်တွေကို စိတ်ဝင်စား လွန်းသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ ကြိုက်လေ့ ရှိတဲ့ ဖက်ရှင်တွေက စတိုင်မိုက်တဲ့ အရာတွေ ဖြစ်တဲ့ အပြင် ကြည့်ကောင်းနေ တတ်ပါ တယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း မိန်းကလေးအဝတ်တွေ သိပ်ဝတ်လေ့ ကြိုက်မ ရှိတာကြောင့် တမျိုးတော့ မြင်ခံရလေ့ …
အသည်းကွဲတဲ့အခါ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကပါ ဒီလိုတွေ ဆိုးဆိုးရွားရွား ခံစားရပါတယ်
အသည်းကွဲတဲ့အခါ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကပါ ဒီလိုတွေ ဆိုးဆိုးရွားရွား ခံစားရပါတယ် အသည်းကွဲ တဲ့အခါ လူတစ်ယောက် အတွက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မှာပဲ ခံစား ရတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် တကယ်တမ်း ခန္ဓာကိုယ်ကပါ အသည်းကွဲ တဲ့ဒဏ်ကို ဆိုးဆိုးရွားရွား ခံစားရတယ် ဆိုတာ သင်သိပါရဲ့လား ? (၁) အစားသောက် မမှန်တာမျိုး ဖြစ်လာ နိုင်ပါတယ်။ အရမ်းစား မိတာမျိုး၊ အစာစားချင် စိတ်ကို မဖြစ်တော့တာ မျိုးတွေေ ပါ့ ။ (၂) နှလုံးခုန်နှုန်းတွေ နည်းလာ ပါလိမ့် မယ်။ သင့်စိတ်ထဲမှာ ဝမ်းနည်းမှုကို ခါးဆီး ခံထားရ တဲ့အတွက် စိတ်မှာ ဖိစီးမှု သွားဖြစ်ကာ သွေးလည်ပတ်မှုကို …
သင့်ကို တစ်ချိန်မှာ သစ္စာဖောက်မယ့် ယောကျာ်းတွေရဲ့ ကိုယ့်ကျင့်လက္ခဏာရပ်များ
သင့်ကို တစ်ချိန်မှာ သစ္စာဖောက်မယ့် ယောကျာ်းတွေရဲ့ ကိုယ့်ကျင့်လက္ခဏာရပ်များ အချစ်ဆိုတာ ပျော်ရွှင်စရာ ကြည်နူးစရာ ဆိုပေမယ့် အချစ်ကို တန်ဖိုးမထားသူတွေလည်း လောကမှာ ရှိပါတယ် ။ အချစ်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ဖို့ ရည်ရွယ်ခဲ့လည်း တစ်ဖက်သူက အချစ်ကို တန်ဖိုးမထားတဲ့သူဆိုရင် သင့်အပေါ် သစ္စာဖောက် မှာပါပဲ။ အချစ်ကို တန်ဖိုးမထားပဲ သစ္စာဖောက်တတ်တဲ့ သူတွေမှာတော့ အခုလို အချက်တွေ ရှိနေတတ်ပါတယ် ။ (၁) ချစ်ပြတတ်တယ် ။ သူတို့ရဲ့ အကျွမ်းဆုံး အရာ တစ်ခုပါပဲ။ စိတ်ထဲက မပါလည်း သူတို့က ကောင်မလေးတွေကို ချစ်ပြတတ်သလို ဂရုလည်း စိုက်တတ်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့်လည်း အလွယ်တကူ ယုံကြည်ပြီး စိတ်ဝင်စားသွားတာမျိုးကို …
သမီးလေးသဲသဲနဲ့အတူ ကြော်ငြာ တွေအတူရိုက်ရင်းဘေးနားကနေ အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ လိုက်ဂရုစိုက် ပေးနေတဲ့ခင်လှိုင်ရဲ့ဗီဒီယိုလေး
သမီးလေးသဲသဲနဲ့အတူ ကြော်ငြာ တွေအတူရိုက်ရင်းဘေးနားကနေ အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ လိုက်ဂရုစိုက် ပေးနေတဲ့ခင်လှိုင်ရဲ့ဗီဒီယိုလေး ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ပရိတ်သတ်တွေကို ရယ်မောပျော်ရွှင်စေနိုင်တဲ့ အပြင်သရုပ်ဆောင် ပိုင်းမှာလည်းဒရမ်မာမျိုးစုံကိုပိုင်နိုင်စွာ လုပ်ဆောငနိုင်တဲ့ ဦးခင်လှိုင်ကိုတော့ လူတိုင်းသိ ကြမယ်ထင်ပါ တယ်‌နော်..။ သူဟာအနုပညာ လောကမှာ ဆယ်စုနှစ် များစွာတိုင်အောင် ရပ်တည်အောင်မြင် နေတဲ့သူဖြစ်ပြီး ပရိတ်သတ်အားပေးမှု အခိုင်အမာရရှိ ထားသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်..။ ဦးခင်လှိုင် ဟာရုပ်ရှင် ကားကြီး များကို လည်းအဆက် မပြတ်ရိုက်ကူးနေ သူဖြစ်ပြီး မိသားစုကို လည်းအချိန်ပေးကာပျော်ရွှင် သာယာနေတာ ပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါ့ပြင်ဦးခင်လှိုင်ရဲ့ သားနဲ့သမီး ဖြစ်တဲ့နေရဲနဲ့ သဇင်ထူးမြင့် ဟာဆိုရင်လည်းအနုပညာ လုပ်ငန်းတွေကို စတင်လုပ်ဆောင် ကာနာမည်ရလာတဲ့ တက်သစ်စအနု ပညာရှင်လေးတွေပါ..။ သမီးလေးဖြစ်တဲ့ …
“အသည်းလေးတွေက ‌ပြော‌တဲ့ ဘာသာစကား” ❤ (Red heart) ဂန္တဝင်မြောက် အချစ်ရဲ့ သင်္ကေတ ပါ။ရိုဆန်တဲ့ သဘောနဲ့ သုံးလို့ ရသလို သူငယ်ချင်းတွေ ကြားမှာလည်း သုံးလို့ ရပါ တယ်တဲ့ 🧡 (Orange heart) – Friend zone ရဲ့ သင်္ကေတလို့ ပြောရမယ် ထင်တယ်။ သိပ်စိတ် မပါတဲ့ အချစ်၊ မတွဲချင်ဘူး သူငယ်ချင်း‌တွေလိုပဲ ဆက်‌နေချင်တဲ့ အခါမျိုးကို ကိုယ်စားပြု နိုင်ပါ တယ်တဲ့ 💛 (Yellow heart) – ကောင်းမြတ်သော နှလုံးသား။ နွေးထွေးတဲ့ အချစ်နဲ့ နှလုံးသားရဲ့ သန့်ရှင်းဖြူစင်မှု။ ပျော်ရွှင်မှု သူငယ်ချင်း …
Previous 1 … 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 Next